ပီတိ: တိုင်ကြဦးမလား ဧည့်စာရင်း
ပြီးခဲ့တဲ့ ပို့စ်မှာ JTC က ငှားတဲ့ 3-room flat မှာ လူ လေးယောက် အထိနေခွင့်ပေးပြီး ၊ 4-room flat မှာတော့ ခြောက်ယောက် နေခွင့် ပေးတယ်လို့ ရေးရင်း အကြောင်းအရာတခုကို သတိရမိပြီး ပြုံးမိပါသေးတယ်။
ကျွန်တော်နဲ့သိတဲ့ အမတယောက် - မသီတာ က JTC ကနေပြီး အိမ်သူကြီးလုပ်ထားတဲ့ မစန္ဒာ ဆီကနေပြီး အခန်းငှားပြီးနေပါတယ်။ HDB 3-room flat မှာ သူတို့ သူငယ်ချင်းအားလုံးပေါင်း လေးယောက် ပျော်ရွှင်စွာအတူနေကြသည်ပေါ့။
တနေ့မှာ မသီတာက မစန္ဒာကို သူ့အမ စင်ကာပူကို အလည်လာမှာမို့လို့ သူ့အခန်းမှာ ခဏနေမယ် ဆိုတာကို ပြောပါတယ်။ မစန္ဒာ နဲ့ ကျန်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေကလည်း သဘောတူပါတယ်။ ဒီမှာကလည်း အဲဒီလိုပဲ ခဏနေပြီး အလည်လာရင် အလုပ်ရှာရင်း လုပ်ကြလေ့ရှိပါတယ်။ အလုပ်ရပြီဆိုမှ အိမ်ခန်းလေးငှား ပြောင်းပြီး နေထိုင်ကြလေ့ရှိပါတယ်။
အဲသည်လိုနဲ့ မသီတာ ရဲ့ အမလည်း သူတို့နေတဲ့ အိမ်ကိုရောက်လာပါတယ်။ အဲဒီတော့မှ မစန္ဒာက အိမ်မှာ လူလေးယောက်ပဲနေရမယ်ဆိုတဲ့ ကန့်သတ်ချက်ကို သတိရပြီးပြောပါတော့တယ်။ မသီတာ နဲ့ ကျန်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကလည်း တပတ်လောက်သာကြာမှာမို့လို့ ဒီအတိုင်းပဲ နေလိုက်ရင် ရမှာပါလို့ ၀ိုင်းပြောပေမယ့်လည်း စာအုပ်ကြီးအတိုင်းသာဖြစ်တဲ့ မစန္ဒာကတော့ မရပါဘူး။ JTC ကို ကိုယ်တိုင်သွားပြီး အိမ်မှာ ဧည်သည်တယောက်ရောက်လို့ နေလို့ရပါသလားဆိုပြီး JTC Summit မှာ ဧည့်စာရင်း သွားတိုင်ပါလေတော့တယ်။ ဟုတ်ကဲ့… ဒီမှာကတော့ မသိလိုက်မသိဘာသာ နေလို့ရပါတယ်။ သိလို့ကတော့ JTC ကလည်း မရဘူးလို့သေချာပေါက်ပြောမှာပေါ့။ မဟုတ်ရင် သူတို့အပြစ်ဖြစ်မှာကိုး။
JTC က မစန္ဒာကို လုံးဝ လူအပိုမထားဖို့ပြောလိုက်တဲ့အပြင် ရဲစခန်းကိုပါ အကြောင်းကြားလိုက်ပါတယ်။ ညနေပိုင်းလည်းရောက်ရော သူတို့အိမ်ကို ရဲတွေဝင်ပြီး စစ်ဆေးလို့ အလည်ရောက်တဲ့ အမလည်း ချက်ချင်းပဲ ဆင်းပေးရပြီး အခြားနီးစပ်ရာကို စုံစမ်းပြီး အိမ်ခန်းကို ချက်ချင်းငှားနေရပါတော့တယ်။
ကျွန်တော်နဲ့လည်း မသီတာ ရဲ့ အမနဲ့က သိတော့၊ ပြောလိုက်တာကတော့
`စန္ဒာတို့များ စင်ကာပူမှာ ဧည့်စာရင်းတိုင်လိုက်တာ ငါမှာတော့ ဘတ်စ်ကားဂိတ်မှာ မအိပ်လိုက်ရတာ ကံကောင်း´ တဲ့….
ဖြစ်ချင်တော့ မစန္ဒာက ကျွန်တော်နဲ့ အရမ်းခင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့ အမ၀မ်းကွဲ ဖြစ်နေလေတော့ စင်ကာပူမှာ ဧည့်စာရင်းတိုင်တဲ့ နင့်အမလေ … ဘောင်းဘီရှည်တောင်ဝတ်ရမှာ ရှက်တော့ ဒူးအောက်ရောက်တဲ့ စကပ်သာဝတ်တယ်တဲ့… လို့…. တွေ့တိုင်း စလေ့ရှိပါတယ်…
ဘာကြောင့် ရှက်တဲ့ အကြောင်းကိုမေးရင်တော့ ဖြေမယ်လေ…. :P
Posted by P.Ti at Monday, July 28, 2008
အဟိ .. ဒီလိုလေးတွေ များ၂ ဖွ ပါ ။
အခုလိုမျိုး အဖြစ်အပျက်ကလေးတွေကို စီးရီးလိုက် ရေးပါလားဟင်။ :P
ဘောင်းဘီဝတ်တာ ရှက်တဲ့အကြောင်း မြန်မြန်ရေး
ဟဲဟဲ တောင်းဆိုချက်အတိုင်း ဖွရင်းဖြေလိုက်ပြီးနော်… :P